ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုရန်ကုသမှုကိုရှာဖွေလိုသောအမျိုးသားများ၏လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများ (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌ Porn On
comment: ခန့်မှန်းခြေ 28% (n = 359) ယောက်ျား၏ဖြစ်နိုင်ခြေ hypersexual လိင်ရောဂါ၏ရှေ့မှောက်တွင်ညွှန်ပြ (သို့မဟုတ်အထက်) မှာ HBI စုစုပေါင်းလက်တွေ့ cutoff (≥53) မှာသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။
J ကိုပြုမူနေစွဲ။ 2016 Jun;5(2):169-78. Doi: 10.1556 / 2006.5.2016.036 ။
Kraus SW1,2,3, Martino က S2,3, Potenza MN3,4.
ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအတွက်ကုသမှုကိုရယူရန်အမျိုးသားများ၏စိတ် ၀ င်စားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အချက်များအားဤလေ့လာမှုကလေ့လာခဲ့သည်။
အင်တာနက်-based ဒေတာစုဆောင်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအသုံးပြုခြင်း, ငါတို့လူဦးရေအချိုးအစားနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုအကဲဖြတ်စစ်တမ်းကောက်မေးခွန်းများ hypersexuality, ညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာကြံအတွက်လက်ရှိအကျိုးစီးပွားဖြည့်စွက်ရန် 1,298 အထီးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုစုဆောင်း။
ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အမျိုးသား ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းကိုကုသရန်စိတ်ဝင်စားကြောင်းတင်ပြကြသော်လည်းယောက်ျားများ၏ ၆.၄% သည်ယခင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုရန်ကုသမှုကိုခံယူခဲ့ကြ ကုသမှုကိုစိတ် ၀ င်စားသောအမျိုးသားများသည်ကုသမှုကိုစိတ်မ ၀ င်စားသောအမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိသိသာသာမြင့်မားသောအဆင့်များကိုအစီရင်ခံရန် ၉.၅ ဆပိုများသည် (OR = 14, 6.4% CI = 9.5-9.52) ။ Bivariate ဆန်းစစ်ခြင်းများအရအကျိုးစီးပွား - ရှာဖွေခြင်း - ကုသမှုအခြေအနေသည်တစ်ကိုယ်ရေ / လက်မထပ်ရခြင်း၊ တစ်ပတ်လျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများပိုမိုကြည့်ရှုခြင်း၊ ပြီးခဲ့သည့်လတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပိုမိုလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းအတွက်ကုသမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်ယခင်ကဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုလုံးဝအသုံးပြုခြင်းမပြုရန်ယခင်ကကြိုးပမ်းမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Binary Logistic Regression analysis မှရလဒ်များသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့် Hypersexual Behaviour Inventory အပေါ်ရမှတ်များများဖြတ်တောက်ခြင်း / ရပ်ဆိုင်းခြင်းတို့ကိုမကြာခဏလျှော့ချ / ရပ်တန့်ကြောင်းညွှန်ပြသည် - ထိန်းချုပ်မှုအဆင့်ခွဲသည်အကျိုးစီးပွား - ရှာဖွေသည့်ကုသမှုအဆင့်အတန်းကိုသိသာထင်ရှားသည့်ခန့်မှန်းသူများဖြစ်သည်။
လေ့လာမှုတွေ့ရှိချက်လက်ရှိစိစစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-ထိန်းချုပ်မှုတိကျတဲ့ရှုထောင့်ဖော်ထုတ်ရည်ရွယ်လေ့အကျင့်များ, Impulse နှင့် / သို့မဟုတ်ကုသမှု-ရှာကြံတစ်ဦးချင်းစီအကြားညစ်ညမ်း၏ပြဿနာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ် compulsive အကြောင်းကြားဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
KEYWORDS: hypersexuality; ညစ်ညမ်း; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ; ကုသမှု-ရှာကြံယောက်ျား
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်စာဖတ်သူ (သို့) ကြည့်ရှုသူများ၌လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအတွက်ရည်ရွယ်ထားသောလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောသဘာဝရှိသည့်စာဖြင့်ရေးသားထားသောအကြောင်းအရာသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံပါအကြောင်းအရာများကိုရည်ညွှန်းသည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူချိန်တွင်လိင်တူမေထုန်နှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသား ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အပန်းဖြေမှုကိုအသုံးပြုကြသည်ဟုဆိုကြသော်လည်းအမျိုးသမီးများကမူညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအပျော်သဘောဖြင့်ကြည့်ရှုခြင်း (<၁၀%) ကိုအစီရင်ခံကြသည်။မော်ဂန်, 2011; Ross, Mansson, & Daneback, 2012; Wright, 2013) ။ ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်အများအပြားတစ်ဦးချင်းစီများအတွက်ကျန်းမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထွက်ပေါက်ဖြစ်သော်လည်း (Hald & Malamuth, 2008), လူအခြို့အခက်အခဲဟာသူတို့ရဲ့အမူအကျင့်စီမံခန့်ခွဲရှိခြင်းသတင်းပို့ပါ။ ဤအလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအဘို့, ညစ်ညမ်းအလွန်အကျွံ / ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်း (တဏှာ, လျော့နည်းသွား Self-ထိန်းချုပ်မှု, လူမှုရေးသို့မဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်ချို့ယွင်းခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်သို့မဟုတ် dysphoric စိတ်ဓါတ်များနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းအသုံးပြုမှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်Kor et al ။ , 2014; Kraus, Meshberg-Cohen, Martino, Quinones, & Potenza, 2015; Kraus, Potenza, Martino, & Grant, 2015; Kraus & Rosenberg, 2014) ။ ညစ်ညမ်း၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းမကြာခဏ (compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ / hypersexuality များအတွက်ကုသမှုရှာဖှသေူအားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်က de Tubino Scanavino et al ။ , 2013; Kraus, Potenza, et al ။ , 2015; Morgenstern et al ။ , 2011) ။ ဥပမာအားဖြင့်, သုတေသီများညစ်ညမ်း (81%) ၏အလွန်အကျွံအသုံးပြုမှု, compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ (78%), နဲ့မကြာခဏပေါ့ပေါ့ / အမည်မသိလိင် (45%) hypersexuality များအတွက်ကုသမှု (ရှာကြံပုဂ္ဂိုလ်များအားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်အသုံးအများဆုံးအပြုအမူတွေအကြားခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့Reid et al ။ , 2012).
Hypersexuality (လူတို့တွင်ပိုပြီးဘုံဖြစ်ပါသည်Kafka, 2010), နှင့်ကုသမှုရှာဖှသေူသည်အခြားလူမျိုးရေး / တိုင်းရင်းသားနောက်ခံကနေထက်အဖြူ / ကော့ကေးဆပ်ဖြစ်ဖို့ကပိုများပါတယ် (Farré et al ။ , 2015; Kraus, Potenza, et al ။ , 2015; Reid et al ။ , 2012) ။ အထွေထွေလူဦးရေအကြားတွင် hypersexuality ၏နှုန်းထားများထိခိုက်နစ်နာပုဂ္ဂိုလ်များ၏အများစု၏ပါဝင်သောအရွယ်ရောက်အမျိုးသားများ (3%) (နဲ့အတူ% -5% 80 ဝန်းကျင်ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်Kafka, 2010) ။ hypersexuality အတွက်ကုသမှုခံယူသူများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ comorbid ရောဂါများ (ဥပမာ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ပစ္စည်းဥစ္စာသုံးစွဲခြင်းနှင့်လောင်းကစားခြင်း) အတွက်စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီရန်ပိုများသည် (> ၅၀%) (က de Tubino Scanavino et al ။ , 2013; Kraus, Potenza, et al ။ , 2015; ရေမွန်, Coleman, & Miner, 2003) နှင့်အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီအန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူများ (ဥပမာ - ကွန်ဒုံးမရှိသောစအိုလိင်နှင့်တခါတရံလိင်ကြင်ဖော်ဘက်များစွာ) တွင်ပါ ၀ င်ပါ။Coleman et al ။ , 2010; Parsons, Grov, & Golub, 2012).
လောလောဆယ် hypersexuality ၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်လက္ခဏာတင်ဆက်မှုနှင့် ပတ်သက်. အနည်းငယ်သာသဘောတူညီမှု (ရှိKingston, 2015) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်အလွန်အကျွံ / ပြဿနာထိတွေ့ဆက်ဆံမှု (တစ်ခုထကြွလွယ်သော-compulsive ရောဂါအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားပြီးGrant et al ။ , 2014hypersexual ရောဂါ), တစ်ဦးအင်္ဂါရပ် (HD ကို) (Kafka, 2010), non-paraphilic compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (Coleman, Raymond, & McBean, 2003), ဒါမှမဟုတ်စွဲလမ်းအဖြစ် (Kor, Fogel, Reid, & Potenza, 2013) ။ ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန် (ကျင်းပေါင်း) အတွက်သူတို့နှင့်အတူ, HD ရှယ်ယာတူညီဘို့အဆိုပြုအကွိမျမြားစှာစံ (Kor et al ။ , 2013; Kraus, Voon, & Potenza, 2016) ။ အထူးကျင်းပေါင်း (American Psychiatric Association, 2013) နှင့် HD ကို (Kafka, 2010) အားနည်းသောထိန်းချုပ်မှု (ဥပမာ - အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ရန်မအောင်မြင်သောကြိုးပမ်းမှုများ၊ တိုက်တွန်းမှု / စွဲလမ်းမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အခက်အခဲ) နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောအသုံးပြုမှု (ဥပမာ - အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေများသို့ ဦး တည်သောအသုံးပြုမှု၊ အပြုအမူ၊ ဥပမာ - အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း၊ ကွန်ဒုံးမဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်း) တို့ပါဝင်သည်။ HD နှင့် SUD များတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ဆက်နွယ်သောလူမှုရေးချို့ယွင်းမှုကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်အသုံးပြုသောစံနှုန်းများလည်းပါဝင်သည်။ သို့သော် SUD သတ်မှတ်ချက်သည်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာမှီခိုမှု (ဆိုလိုသည်မှာသည်းခံမှုနှင့်ရုပ်သိမ်းခြင်း) ကိုအကဲဖြတ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် HD တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၌အလွန်အကျွံ / ပြproblemနာပါ ၀ င်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်စိတ်ကျေနပ်မှုမရသည့်စိတ်အခြေအနေကိုတိုင်းတာသည့်စံနှုန်းများပါ ၀ င်သည်
HD ကိုများအတွက်သတ်မှတ်ချက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်တရားဝင်မှုထောက်ပံ့အောင်မြင်တဲ့လယ်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးနေသော်လည်း (Reid et al ။ , 2012), အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (American Psychiatric Association, 2013) DSM-5 ကနေ HD ကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ အကွိမျမြားစှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများခန္ဓာဗေဒနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်, မော်လီကျူးမျိုးရိုးဗီဇ, pathophysiology, ရောဂါနှင့် neuropsychological စမ်းသပ်ခြင်း (အပါအဝင်သုတေသနလုပ်ငန်းများမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ထမြောက်ကြသည်Piquet-Pessôa, Ferreira, Melca, & Fontenelle, 2014HD ကိုမှုခင်းအလွဲသုံးစားမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသို့မဟုတ်မှားယွင်းသောအပြုသဘော diagnoses ထုတ်လုပ်နိုင်ကြောင်း), အဖြစ်စိုးရိမ်ပူပန်မှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများနှင့်အပြုအမူများပုံမှန်အကွာအဝေးနှင့်ရောဂါဗေဒအဆင့်ဆင့်အကြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘာသာဂုဏ်ထူး၏မရှိခြင်း (ပေးထားတခု, 2013; Wakefield, 2012; ဆောင်းရာသီ, 2010) ။ စာပေ၏မကြာသေးမီကပြန်လည်သုံးသပ် HD နဲ့ကျင်းပေါင်းတို့အကြားလက်တွေ့နှင့် neurobiological တူညီတွေ့၏ သို့သော်လက်ရှိတွင်မလုံလောက်သောဒေတာ (အရှင်သုတေသီများနှင့် Clinician များအတွက်ခွဲခြား, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုအားထုတ်မှုရှုပ်ထွေး, ရရှိနိုင်ပါသည်Kraus et al ။ , 2016).
ညစ်ညမ်း၏ဤအမှု၌, အလွန်အကျွံ / ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်း - လောလောဆယ်အနည်းငယ်သာတည်းကကုသမှုမရှိဘူး hypersexual အပြုအမူတွေများအတွက်ကုသမှုရှာတစ်ဦးချင်းစီ '' ရိပ်မိလိုအပ်ချက်နဲ့ဆက်စပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုအချက်များနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ နေ့စွဲစေရန်, တစ်ဦးတည်းသာလေ့လာမှုညစ်ညမ်း၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ကုသမှုရှာကြံအတွက်ယောက်ျားရဲ့အကျိုးစီးပွားနှင့်ဆက်စပ်သည့်အချက်များကိုလေ့လာခဲ့သည်။ Gola, Lewczuk နှင့် Skorko (2016) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအနုတ်လက္ခဏာလက္ခဏာများ (ဥပမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ထိန်းချုပ်မှုချို့ယွင်းမှုများကြောင့်ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာမှု၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ဆက်ဆံရေးပြcesနာများ) သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုပမာဏထက်ကုသမှုရှာဖွေခြင်းနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအလွန်အကျွံ / ပြaticနာအသုံးပြုခြင်းကိုကုသမှုခံယူသူများကအများအားဖြင့်အစီရင်ခံသော်လည်းဤပုဂ္ဂိုလ်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုအနည်းငယ်သာသိရှိရသေးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မည်သည့်အင်္ဂါရပ်များ (ဥပမာ - အကြိမ်ကြိမ်ထွက်ခွာသွားရန်မအောင်မြင်သောကြိုးစားမှုများ၊ ပြင်းထန်သောတိုက်တွန်းချက်များ / စိတ်စွဲလမ်းမှုများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက်များ) သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအလွန်အကျွံ / ပြuseနာကိုအသုံးပြုရန်ရှာဖွေသည့်ကုသမှုများအတွက်အလိုဆန္ဒများနှင့်ဆက်နွှယ်မှုရှိသည်ကိုမသိရှိရသေးပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများပြproblemနာကိုအသုံးပြုရန်ကုသမှုကိုလိုလားသူများနှင့်ကုသလိုသူများကိုခွဲခြားသိမြင်ရန်အထောက်အကူပြုမည့်ထူးခြားသောလက္ခဏာများရှိပါသလား။ လက်ရှိ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်အလွန်အကျွံမကုသရသည့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောပြtoနာများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဒီဇိုင်းထုတ်ခြင်းနှင့်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်မှုများသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်ပြည်ပတို့တွင်အားနည်းနေသည်။Hook, Reid, Penberthy, Davis, & Jennings, 2014) ။ ထိုကဲ့သို့သောစျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏ကဲ့သို့သောအခြားအချက်များလည်းညစ်ညမ်း၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်း၏ရောဂါနှင့်ကုသမှုရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, လတ်တလောလေ့လာမှုညစ်ညမ်းသုံးပြီးငယ်ရွယ်အထီးအကြားအသုံးပြုမှုများ၏အဆင့်ဆင့်မှမသက်ဆိုင်သောဖြစ်ခြင်းစဉ်စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ညစ်ညမ်း၏ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏ကစာရင်းအင်း (အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဖို့ "ရိပ်မိစွဲ" ခန့်မှန်းကြောင်းတွေ့ရှိရGrubbs, Exline, Pargament, Hook, & Carlisle၊ ၂၀၁၅) ။ ထိုကဲ့သို့သောစျယာနျဘာသာတရားကို / ဝိညာဉ်ရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏အဖြစ်အချက်များဖြစ်နိုင်သော hypersexual အပြုအမူများအတွက်ကုသမှုရှာတစ်ဦးချင်းစီ '' အလိုဆန္ဒကိုအကျိုးသက်ရောက်ပုံကိုနားလည်ခြင်းညံ့ဖျင်းနားလည်သဘောပေါက်နေဆဲဖြစ်သည်။
ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူ ၁,၂၉၈ ဦး မှအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ ဤလေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုကိုကုသရန်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏မိမိကိုယ်ကိုတင်ပြသောစိတ် ၀ င်စားမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များ (ဥပမာ - လူ ဦး ရေစာရင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာသမိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ) ကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုရန်ကုသမှုကိုရယူရန်လက်ရှိစိတ်ဝင်စားမှုကိုအမျိုးသားများကမည်သို့တင်ပြမည်ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ အမျိုးသားများနှင့်သက်ဆိုင်သောကုသမှုမခံယူလိုသူများထံမှသင်တန်းသားများကိုကျွန်ုပ်တို့ခန့်အပ်ထားသဖြင့်ထိုနှုန်းသည်အတော်အတန်နိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ဒုတိယအချက်မှာ Hypersexual Behaviour Inventory (HBI) ကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာများအကြား hypersexuality ၏ပျံ့နှံ့မှုကိုစုံစမ်းခဲ့သည်။Reid, Garos, & လက်သမား, 2011) ။ ကျနော်တို့ကုသမှု - စိတ်ဝင်စားယောက်ျားကုသမှု - စိတ်မဝင်စားယောက်ျားထက် HBI အပေါ်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များအစီရင်ခံလိမ့်မည်ဟုတွေးဆ။ တတိယအချက်အနေဖြင့်စာပေတွင်ရရှိနိုင်သောအချက်အလက်ရှားပါးမှုကို ထောက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုရန်အတွက်စိတ် ၀ င်စားသူသို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိသောအမျိုးသားများအကြားလူ ဦး ရေအချိုးအစားနှင့်လိင်ဆိုင်ရာသမိုင်းအချက်အလက်များခွဲခြားမှုရှိမရှိကျွန်ုပ်တို့စူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများအတွက်ကုသမှုကိုကိုယ်တိုင်တင်ပြသည့်စိတ်ဝင်စားမှု၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်သူများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများအကြားဆက်ဆံရေးကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုမှုအတွက်ကုသမှုကိုရှာဖွေရန်စိတ်ဝင်စားသူများသည်အစီရင်ခံရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည် - (က) ပိုမိုမြင့်မားသောအပတ်စဉ်ကြိမ်နှုန်းနှင့်အသုံးပြုမှုကြာချိန်၊ (ခ) ယခင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုဖြတ်တောက်ပစ်ရန်သို့မဟုတ်ဖြတ်တောက်ရန်အတိတ်ကကြိုးစားမှုများ၊ (ဂ) လွန်ခဲ့သောလကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပိုမိုကြိမ်နှုန်း။
ဒေတာကို Self-အစပျိုး cognitive- employ မှတစ်ဦးချင်းစီ '' Self-ထိရောက်မှုတိုင်းတာရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေတဲ့မေးခွန်းလွှာများ psychometric ဂုဏ်သတ္တိများစုံစမ်းစစ်ဆေးသောတစ်ပြိုင်နက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ် (Self-အစပျိုးညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု-လျှော့ချရေးမဟာဗျူဟာကိုယ်ပိုင်ထိရောက်မှုမေးခွန်းလွှာ) စုဆောင်း 1,298 ယောက်ျားထံမှကောက်ယူခဲ့သည် ၎င်းတို့၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရန်ရည်ရွယ်အပြုအမူမဟာဗျူဟာများ (Kraus, Rosenberg, & Tompsett, 2015) ။ ပါဝင်များအတွက်လိုအပ်ချက်, အထီးဖြစ်ခြင်းသည်အနည်းဆုံး 18 နှစ်ရှိပြီဖြစ်ခြင်းများနှင့်ယခင်6လအတွင်းအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးတော်မူပြီးမှခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့တော်တော်များများလူမှုရေးမီဒီယာ, စိတ်ပညာသုတေသနနှင့်ကျန်းမာရေး-related ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာဇွန်လဇူလိုင်လ (2013) ၏လတာကာလအတွင်းလေ့လာမှုတစ်ခုအတိုဖော်ပြချက်တင်ခဲ့သည်။ နမူနာ (88%) ၏အများစု Craigslist အပေါ် posted သတိပေးချက်များကိုအသုံးပြုပြီးစုဆောင်းခဲ့သည်® (ဆိုလိုသည်မှာအလုပ်ကြော်ငြာများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းအခွင့်အလမ်းများဆိုင်ရာကဏ္devotedများပါ ၀ င်သောကြော်ငြာ ၀ ဘ်ဆိုဒ်) ။ သုတေသနတွင်ပါ ၀ င်မှုနှင့်သုတေသနမဟုတ်သောလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါ ၀ င်ရန်တောင်းဆိုမှုများပါ ၀ င်သော Craigslist ၏“ Community Volunteer” အပိုင်းအောက်ရှိဝက်ဘ်လင့်ခ်နှင့်အတူလေ့လာမှု၏အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များတွင်သတိပေးချက်များပါဝင်သည်။ ကျန်ရှိသည့်ဖြေဆိုသူ ၁၂% သည်လေ့လာမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အတိုချုပ်ဖော်ပြချက်နှင့်စိတ်ပညာအခြေပြုသုတေသန ၀ က်ဘ်ဆိုက် ၂ ခု (ဥပမာ - Psych Research and Psych Hanover) နှင့်အခြားကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောဝက် (ဘ်) ဆိုဒ်များ (ဥပမာ - အမေရိကန်လိင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအသင်း) သို့ပို့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ညစ်ညမ်း၏ Non-အသုံးပြုသူများဆုရ၏မျှော်လင့်ချက်နှင့်အတူလေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဖြစ်နိုင်ခြေကို minimize လုပ်ဖို့လိုခငျြသောကွောငျ့ကြှနျုပျတို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတစ်ခုမက်လုံးပေးအဖြစ်တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြီးမားတဲ့ဆုပူဇော်ခဲ့ပါဘူး။ ထိုကွောငျ့, တစ်ဦးမက်လုံးပေးအဖြစ်ကျနော်တို့ $ 2.00 တစ်ဦး $ 150 လှူဒါန်းမှုဦးရေအများဆုံးနှင့်အတူတိုင်းပြီးစီးစစ်တမ်းများအတွက်အမေရိကန်ကင်ဆာလူ့အဖွဲ့အစည်းမှလှူဒါန်းခဲ့လိမ့်မယ်လို့ယောက်ျားအကြောင်းကြားခဲ့သည်။ ဖှပြီးနောက်ယောက်ျားအမိန့်သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချဖို့ randomized ခဲ့မေးခွန်းတစ်ခုစီးရီးပြီးစီးခဲ့သည်။ အွန်လိုင်းမှစစ်တမ်း tool ကိုနောက်ဆုံးလာသောလူဦးရေမေးခွန်းလွှာ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူအသီးအသီးပါဝင်သူအားလုံးကိုမေးခွန်း၏အမိန့် randomized ။
ပါဝင်သူပျမ်းမျှအသက်မှာ ၃၄.၄ နှစ်ဖြစ်သည်။SD = 13.1) ။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အမျိုးသား ၈၁ ရာခိုင်နှုန်းသည်အမေရိကန်မှဖြစ်ပြီး ၈ ရာခိုင်နှုန်းမှာကနေဒါမှဖြစ်ပြီး ၁၁ ရာခိုင်နှုန်းသည်အခြားအင်္ဂလိပ်စကားပြောသောနိုင်ငံများမှ (ဥပမာ - ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းနှင့်သြစတြေးလျ) မှဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အမျိုးသား ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအနည်းဆုံးတစ်ပါတ်သို့မဟုတ်တစ်ကြိမ်ကြည့်ရှုသည်ဟုအစီရင်ခံကြသည်
ဤသည်မေးခွန်းလွှာသင်တန်းသားများကို '' လူဦးရေ (ဥပမာအသက်, အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ, နှင့်အမြင့်ဆုံးပညာရေးအဆင့်) သတင်းအချက်အလက်အကဲဖြတ်။
ကျနော်တို့ (သင်တန်းသားများကို '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်း (ဥပမာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်အရေအတွက်, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု၏သမိုင်း) ကိုတိုင်းတာရန်ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့မေးခွန်းလွှာကိုအသုံးပြုKraus & Rosenberg, 2016; Kraus, Rosenberg က, et al ။ , 2015; Rosenberg က & Kraus, 2014).
ကျနော်တို့ (သင်တန်းသားများကို '' ညစ်ညမ်းသမိုင်းဝိသေသလက္ခဏာများအကဲဖြတ်ရန်ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်အလုပ်လုပ်နေတဲ့မေးခွန်းလွှာအသုံးပြုသော (ဥပမာညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏ကြိမ်နှုန်း, အချိန်တစ်ပတ်ကိုညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်နေခဲ့ရသည်, ညစ်ညမ်းသုံးပြီး "နောက်ကျောကိုခုတ်" ရန်ကြိုးစားမှုအရေအတွက်နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုကြိုးစားမှုနုတ်ထွက်)Kraus & Rosenberg, 2016; Kraus, Rosenberg က, et al ။ , 2015; Rosenberg က & Kraus, 2014).
Hypersexual အပြုအမူစာရင်း (HBI)
စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ် dysphoric စိတ်ဓါတ်များ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေးအထိန်းချုပ်ဖို့ထပ်ခါတလဲလဲမအောင်မြင်ကြိုးစားမှု, တိုကျတှနျးထားသနှင့်အပြုအမူများနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ချို့ယွင်းမှဦးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတုံ့ပြန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ပါဝငျသော - ထို HBI hypersexuality ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုတိုင်းတာတဲ့ 19-ကို item စာရင်းဖြစ်ပါတယ် (Reid et al ။ , 2011) ။ ဖြေဆိုသူများသည်လိင်ဆိုင်ရာအမူအကျင့်တစ်ခုစီကိုသူတို့မည်မျှကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးသည်ကိုခန့်မှန်းကြသည် (၁ = ဘယ်တော့မှ၊ ၅ = အလွန်မကြာခဏ) ။ HBI မှရမှတ်များမှာရမှတ် ၁၉ မှ ၉၅ အထိရှိပြီး ၅၃ ရမှတ် (သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသော) သည်ဖြစ်နိုင်သည်မှာ“ hypersexual disorder” ဖြစ်နိုင်သည်။ HBI စုစုပေါင်းနှင့်၎င်း၏ subscales အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြည်တွင်းရေးယုံကြည်စိတ်ချရရှိခဲ့ပါတယ် (စုစုပေါင်း = α = 0.95; ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း α = 0.91; အကျိုးဆက်များ α = 0.86; ထိန်းချုပ်မှု α = 0.93) ။
"သင်သည်သင်၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီကိုရှာလို, သို့သော်သေးမှုကြောင့်အမျိုးမျိုးသောရန်ပြုကြပြီမဟုတ်: ကျနော်တို့ကအောက်ပါမေးခွန်း" မပါ "" ဟုတ်ကဲ့ "ညွှန်ပြခြင်းငှါသူတို့တောင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကုသမှုရှာကြံအတွက်ယောက်ျားရဲ့လက်ရှိအကျိုးစီးပွားအကဲဖြတ်သို့မဟုတ် အကြောင်းပြချက် (ဥပမာ, အရှက်ကွဲခြင်း, အရှက်, အဘယ်မှာမသွားသေချာမ) ။ "
ကျနော်တို့ကအောက်ပါမေးခွန်း "မပါ" "ဟုတ်ကဲ့" ညွှန်ပြခြင်းငှါသူတို့တောင်းဆိုနေတာသို့မဟုတ်ခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကုသမှုရှာကြံ၏သင်တန်းသားများကို '' အတိတ်သမိုင်းအကဲဖြတ်: "သင်သည်အစဉ်အဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညစ်ညမ်းသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီရှာပြီ (ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားဖြင့်ငါတို့သည်တစ်ဦးကိုတှေ့မွငျဆိုလို တိုင်ပင်, ကုထုံး, စိတ်ပညာရှင်နှင့်စိတ်ရောဂါ)? ဟုတ်ကဲ့ "ညွှန်ပြတဲ့သူတစ်ဦးချင်းစီသည်" ဟု five- အပေါ်ဟုတ်ကဲ့လျှင်, သင်လက်ခံရရှိသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုသမှုကိုဘယ်လိုအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့သလဲ ")" ဤမေးခွန်းကိုအဘို့, သူတို့က (၎င်းတို့၏ဆေးကုသမှုခဲ့ပုံကိုအထောက်အကူဖြစ်စေဟုမေးခဲ့သည် " ပွိုင့်စကေး ( "မဟုတ်ပါဘူးမှာအားလုံးအထောကျအကူ", "အနည်းငယ်အထောက်အကူဖြစ်စေ," အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေ "နှင့်" "အလွန်အမင်းအထောက်အကူဖြစ်စေ" ", အတန်ငယ်အထောက်အကူဖြစ်စေ") ။
ကျနော်တို့ (က IBM ကော်ပိုရေးရှင်း 22 ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသူ။ ကို Windows, ဗားရှင်း 2012 များအတွက် IBM က SPSS စာရင်းအင်းများ) SPSS-23.0 အသုံးပြုသောဖော်ပြရန်စာရင်းဇယားများအတွက်, မန်း-Whitney U စမ်းသပ်မှု, Pearson chi-စတုရန်းစမ်းသပ်မှုနှင့် binary Logistic ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကယူဆချက်ကုသမှု-စိတ်ဝင်စားနှင့်ကုသမှု-စိတ်မလူတို့၏စပ်ကြားနှိုင်းယှဉ်ပါဝငျသညျ။ ခြုံငုံနှစ်ဦးကိုတဖက်သတ်စမ်းသပ်မှုများနှင့် α အားလုံးမူလတန်းယူဆချက်များအတွက် 0.05 ၏အဆင့်ကိုအသုံးချခဲ့ကြသည်။
ဒီလေ့လာမှုမှာအားလုံးလုပျထုံးလုပျနညျးဟယ်လ်စင်ကီ၏ကြေညာစာတမ်းနှင့်အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ Bowling Green ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်များ၏ Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့လေ့လာမှုအတည်ပြုခဲ့သည်။ အားလုံးသင်တန်းသားများကိုလေ့လာမှု၏အတိုင်းအတာများနှင့်အားလုံးထောက်ပံ့ပေးစာဖြင့်ရေးသားအသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့် ပတ်သက်. အသိပေးခံခဲ့ရသည်။
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာကြံအတွက်အကျိုးစီးပွားအားဖြင့် stratified ယောက်ျားအတွက် Hypersexuality နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဝိသေသလက္ခဏာများ
စစ်တမ်းကောက်ယူ 1,298 တစ်ဦးချင်းစီ၏ထွက်, 14.3% (n = 186) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုကိုရှာဖွေရန်အတွက်လက်ရှိစိတ်ဝင်စားမှုသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လူ ဦး ရေနည်းသော (၆.၄%၊ n = ၈၃) ယခင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုရန်ကုသမှုခံယူကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်ကုသမှုခံယူသူများမှာ၎င်းကိုအနည်းငယ်သာအထောက်အကူပြုသည်ဟုမှတ်ယူကြသည်။M = 2.7, SD = 1.2) ။ ယခင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကုသမှုခံယူခဲ့သောအမျိုးသား ၈၃ ယောက်အနက် ၄၈.၂% သည်n = ၄၀) သူတို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုရန်ကုသမှုခံယူရန်စိတ်ဝင်စားကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
မြေတပြင်လုံးနမူနာကိုသုံးပြီးကျနော်တို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေအဘို့ယုတ်ရမှတ် (5.1 ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရSD = 1.8, skewness = -0.46, kurtosis = -0.34) နှင့် 1.9 (SD ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုအပတ်စဉ်ကြည့်ရှုသည့်အချိန်ပမာဏအတွက် = 1.4, skewness = 0.86, kurtosis = 0.34) ။ ကိန်းဂဏန်းများ 1 နှင့်2အချိန်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ပမာဏ၏ယောက်ျားရဲ့အသုံးပြုမှုအတွက်ပြပွဲရာခိုင်နှုန်းသူတို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာကြံအတွက်ယောက်ျားရဲ့အကျိုးစီးပွားအားဖြင့်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်အပတ်တိုင်းနေခဲ့ရသည်။
ပုံ 1 ။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းအားဖြင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာကြံအတွက်စိတ်ဝင်စားယောက်ျား၏ရာခိုင်နှုန်း
ပုံ2။ အချိန်ပမာဏအားဖြင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာကြံအတွက်စိတ်ဝင်စားယောက်ျား၏ရာခိုင်နှုန်းညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်နေခဲ့ရသည်
ပုံ3။ HBI လက်တွေ့ cutoff ရမှတ် (≥53) ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုစိတ်ဝင်စားယောက်ျား၏ရာခိုင်နှုန်း
HBI ရမှတ်ကိုလည်းတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းရမှတ်များဖြစ်ကြသည်: HBI စုစုပေါင်း (M = 43.2, SD = 17.9, skewness = 0.74, kurtosis = -0.13), ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင် (M = 17.6, SD = 7.4, skewness = 0.41, kurtosis = -0.61), အကျိုးဆက်များ (M = 7.8, SD = 4.0, skewness = 1.2, kurtosis = 0.74) နှင့်ထိန်းချုပ်မှု (M = 17.8, SD = 8.7, skewness = -0.46, kurtosis = -0.24) ။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 28% (n = 359) ယောက်ျား၏ဖြစ်နိုင်သော HD ကို၏ရှေ့မှောက်တွင်ညွှန်ပြ (သို့မဟုတ်အထက်) မှာအကြံပြု HBI စုစုပေါင်းလက်တွေ့ cutoff (≥53) မှာသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ ပုံအဖြစ်3ရှိုးများ, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာကြံအတွက်ယောက်ျားရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုအပြုသဘော [သည့် HBI စုစုပေါင်းလက်တွေ့ cutoff ရမှတ်တွေ့ဆုံသို့မဟုတ်ကျော်လွန်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်χ2 (1) = 203.27, p <0.001, Cramer ရဲ့ V = 0.40, OR = 9.52, 95% CI = 6.72-13.49] ။
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာကြံအတွက်အကျိုးစီးပွားအားဖြင့် stratified အမျိုးသားများတွင်လူဦးရေအချိုးအစားနှင့်လိင်ဝိသေသလက္ခဏာများ
အဆိုပါ skewness နှင့် kurtosis ရမှတ် (အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်) စဉ်ဆက်မပြတ် variable တွေကိုအဘို့အကြောင်းပြချက် (± 1.5) အတွင်းခဲ့ကြသည်သော်လည်း, ငါတို့သည်နမူနာများအတွက်ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးခဲ့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်တစ် Kolmogorov-Smirnov (K-S) ကိုစမ်းသပ်လုပ်ဆောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ K-S ကိုစမ်းသပ်မှုများအတွက်ရလဒ်များအားလုံး (သိသိသာသာခဲ့ကြသည် ps <0.001), ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူး၏ယူဆချက် HBI စုစုပေါင်း HBI subscales, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေနှင့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအပတ်တိုင်းသုံးစွဲအချိန်ပမာဏနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်မခံခဲ့ရကြောင်းညွှန်ပြ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် parametric မဟုတ်သောစစ်ဆေးမှုများကိုအသုံးပြုခဲ့သည် U စဉ်ဆက်မပြတ် variable တွေကိုနှင့်အမျိုးအစား variable တွေကိုများအတွက်အလုပ် Pearson chi-စတုရန်းစမ်းသပ်မှုများအတွက်စမ်းသပ်) ။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းများအရကုသမှုကိုစိတ်မ ၀ င်စားသောအမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကုသမှုကိုစိတ်ဝင်စားသည့်အမျိုးသားများသည်တစ်ကိုယ်ရေဘဝများဖြစ်ဖွယ်ရှိပြီးပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံမှုနည်းသောလွန်ခဲ့သော (ရက်ပေါင်း ၃၀)၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အတူ“ ဖြတ်တောက်” ခြင်း၊ သူတို့သည်ယခင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်ကုသမှုခံယူခဲ့ကြပြီးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပိုမိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည် (လွန်ခဲ့သောရက်ပေါင်း ၃၀)၊ HBI စုစုပေါင်းနှင့် subscales သုံးခုပိုမိုရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပညာရေးအဆင့်၊ နေထိုင်မှုအခြေအနေ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှု၊ မကြာသေးမီက dyadic လိင်လှုပ်ရှားမှု (လိင်အင်္ဂါ၊ စအိုသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း)၊ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှုသမိုင်းနှင့်တစ်သက်တာလိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်ကုသမှုနှင့်စိတ် ၀ င်စားမှုကင်းသောအမျိုးသားများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုမရှိခဲ့ပါ။ မိတ်ဖက်များ (ဇယားကိုကြည့်ပါ 1 ပြီးပြည့်စုံသောအသေးစိတျအဘို့) ။
စားပွဲတင် 1 ။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာကြံအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ '' အကျိုးစီးပွားနှင့်ဆက်စပ်လူဦးရေအချိုးအစားနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်းအချက်များ
(ဟုတ်ကဲ့n = ၂၀186)
အမှတ် (n = ၂၀1,111)
အသက်အရွယ် 32.8 (11.6) 34.6 (13.3) 1.37 0.17
လူပျို, လက်ရှိချိန်းတွေ့မဟုတ်ပါဘူး 37.1 29.3 9.27
အချို့ချိန်းတွေ့ပေမယ့်သီးသန့်မဟုတ်ပါဘူး 21.0 16.7
လက်ထပ် / ပူးပေါင်း 41.9 54.0
အထက်တန်းကျောင်းဘွဲ့ရ 22.2 15.9 4.72 0.19
ကောလိပ်တချို့ 28.6 32.5
တွဲဖက်ဒီဂရီ 13.0 12.7
ဘွဲ့သို့မဟုတ်ဒီထက်မြင့် 36.2 38.8
တယောက်တည်း 21.6 21.5 0.01 0.99
အခန်းဖော်တွေနဲ့အတူ 17.3 17.6
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် / မိသားစုဝင်များနှင့်အတူ 61.1 60.8
လိင်ကွဲ 70.3 71.8 0.25 0.88
ဂေး 11.6 11.7
ရိုးရိုး 18.0 16.5
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု 78.0 81.7 1.76 0.41
ကေနဒါ 10.8 8.1
အခြားအင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ငံများ 11.3 10.3
အခြားဆိုဒ် 8.1 12.6
အဘယ်သူမျှမ 88.7 84.8
10 ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းမိတ်ဖက် 58.1 53.3 3.75 0.15
11-20 မိတ်ဖက် 18.3 24.6
30 + မိတ်ဖက် 23.7 21.9
အဘယ်သူမျှမ 51.9 44.8
အဘယ်သူမျှမ 74.7 79.2
Yes 54.6 63.5 5.29
အဘယ်သူမျှမ 45.5 36.5
အဘယ်သူမျှမ 53.3 46.0
10 ကြိမ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း 31.0 36.8
11-20 ကြိမ် 25.5 30.3 7.88
21 + ကြိမ် 43.5 32.9
Hypersexual အပြုအမူ Inventory
HBI စုစုပေါင်းရမှတ်a 62.4 (17.8) 40.0 (15.8) 14.16
HBI ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း subscaleb 22.7 (7.5) 16.8 (7.1) 9.50
HBI အကျိုးဆက်များ subscalec 11.6 (4.5) 7.1 (3.5) 12.43
HBI ထိန်းချုပ်မှု subscaled 28.1 (8.4) 16.1 (7.5) 15.23
အစဉ်အဆက် porn များအတွက်ကုသမှုရှာသောအခါ
Yes 21.5 3.9 82.83
အဘယ်သူမျှမ 78.5 96.1
အပတ်စဉ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု frequency 5.5 (1.9) 5.1 (1.8) 3.68
အချိန်ပမာဏတစ်ဦးချင်းစီအပတ်တွင် porn ကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ရသည် 2.4 (1.6) 1.9 (1.3) 4.95
porn နှင့်အတူကြိုးစားမှုပြန် Cut
0 ကြိုးစားမှု ( "ဘယ်တော့မှ") 12.9 65.5 216.04
1-to-3 ကြိုးစားမှုအတိတ် 40.9 23.4
4 + အတိတ်ကြိုးစားမှု 46.2 11.2
porn နှင့်အတူကြိုးစားမှု Quit
0 ကြိုးစားမှု ( "ဘယ်တော့မှ") 25.3 75.0 251.05
1-to-3 ကြိုးစားမှုအတိတ် 34.4 19.2
4 + အတိတ်ကြိုးစားမှု 40.3 5.8
မှတ်စု။ Pearson chi-စတုရန်းစမ်းသပ် dichotomous variable တွေကိုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ မန်း-Whitney U စမ်းသပ်မှု (Z ရမှတ်) စဉ်ဆက်မပြတ် variable တွေကိုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ရဲရင့်တန်ဖိုးများမှာကစာရင်းအင်းသိသိသာသာကိုယ်စားပြု p <0.05 ။
aအကြွင်းမဲ့အာဏာအကွာအဝေး, 19-95 ။
bအကြွင်းမဲ့အာဏာအကွာအဝေး, 7-35 ။
cအကြွင်းမဲ့အာဏာအကွာအဝေး, 4-20 ။
dအကြွင်းမဲ့အာဏာအကွာအဝေး, 8-40 ။
Next ကိုကျနော်တို့အကျိုးစီးပွား-In-ရှာ-ကုသမှုအဆင့်အတန်းနှင့်ဆက်စပ်သော variable တွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့တစ် binary Logistic ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးအစားငါအမှား၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချဖို့, ကျနော်တို့မော်ဒယ်သို့မှာသိသာသာ variable တွေကိုထဲသို့ဝင် p <0.001 ။ အဆိုပါမော်ဒယ် statist, စာရင်းအင်းသိသိသာသာဖြစ်ခဲ့သည်2 = 394.0, p <0.001 df = 10 နှင့် 46.7% (Nagelkerke ရဲ့ရှင်းပြသည် R2) စုစုပေါင်းကှဲလှဲ၏။ ခွဲခြားကုသမှုစိတ်ဝင်စားသူတို့၏အမျိုးအ 43.5% ရှိ၏ ကုသမှုစိတ်မဝင်စားသူတို့အဘို့ 96.6%; နှင့်စုစုပေါင်းခွဲခြား 89.0% ဖြစ်ခဲ့သည်။ စားပွဲတင်အဖြစ်2အကျိုးစီးပွား-In-ရှာ-ကုသမှုအဆင့်အတန်း display တွေသိသိသာသာခန့်မှန်းခြင်းနှင့် 1 +-to-34ညစ်ညမ်းနှင့်အတူကြိုးစားမှု "နောက်ကျောကိုခုတ်" ပါဝင်သည်,4+ ညစ်ညမ်းနှင့်အတူကြိုးစားမှုဆေးလိပ်ဖြတ်လျက်, HBI ထိန်းချုပ်မှု subscale အပေါ်ရမှတ်များ။
စားပွဲတင်2။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာကြံအတွက်အကျိုးစီးပွားစာရင်းအင်းခန့်မှန်း
ချိန်ညှိ OR (95% CI)
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု frequency 0.04 0.07 1.04 (0.91, 1.19)
အချိန်ပမာဏ porn ကိုကြည့်အပတ်တိုင်း 0.12 0.08 1.12 (0.96, 1.32)
အစဉ်အဆက် porn များအတွက်ကုသမှုရှာသောအခါ 0.43 0.30 1.54 (0.86, 2.77)
0 ကြိုးစားမှု 1.61 0.30 1.00
1-to-3 ကြိုးစားမှုအတိတ် 1.43 0.36 4.98 (2.76, 8.99)*
4 + အတိတ်ကြိုးစားမှု 4.18 (2.05, 8.55)*
0 ကြိုးစားမှု 0.48 0.27 1.00
1-to-3 ကြိုးစားမှုအတိတ် 1.17 0.35 1.61 (0.95, 2.73)
4 + အတိတ်ကြိုးစားမှု 3.23 (1.63, 6.38)*
HBI ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း subscale -0.02 0.02 0.98 (0.95, 1.02)
HBI အကျိုးဆက်များ subscale 0.01 0.04 1.01 (0.94, 1.09)
HBI ထိန်းချုပ်မှု subscale 0.13 0.02 1.14 (1.10, 1.18)*
မှတ်စု။ Logistic ဆုတ်ယုတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီရှာကြံအတွက်ယောက်ျားရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုအကျိုးစီးပွားဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်း။ မော်ဒယ်အကျဉ်းချုပ်: χ2 = 394.0, p <0.001 df = 10. Nagelkerke ရဲ့ R2 = 46.7% ။ အမျိုးအစားခွဲခြား - ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီလိုသူ ၄၃.၅%၊ 43.5% ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီလိုသောမ; နှင့်စုစုပေါင်း 96.6% ဖြစ်ခဲ့သည်။ ရဲရင့်သောတန်ဖိုးများသည်စာရင်းအင်းအရသိသာစွာကိုယ်စားပြုသည် p <0.05 ။
*p <0.01 ။
hypersexuality အားဖြင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာကြံအတွက်ယောက်ျားရဲ့အကျိုးစီးပွားအားဖြင့်ရွေးချယ်ထားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-သမိုင်း variable တွေကို၏အသင်းအဖွဲ့များ
hypersexuality နှင့်ကုသမှု - ရှာဖွေမှုအဆင့်အတန်းအပေါ်ကွဲပြားခြားနားအုပ်စုများအကြားဆက်ဆံရေးကိုရှာဖွေစူးစမ်းနိုင်ရန်အတွက်, ယောက်ျားလေးအုပ်စုများသို့ခွဲခြားခဲ့သည်: (က) hypersexuality နှင့်အတူကုသမှု - စိတ်ဝင်စားယောက်ျား (n = 132); (ခ) လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုစိတ်မဝင်စားသောကုသမှု - စိတ်မဝင်စားသောအမျိုးသားများ (n = 227); (ဂ) လိင်စိတ်မပါဘဲကုသမှုခံယူသောအမျိုးသားများ (n = 54); နောက်ဆုံးအနေနှင့် (d) လိင်စိတ်မပါဘဲကုသမှုကိုစိတ်မ ၀ င်စားသောအမျိုးသားများ (n = 884) ။ ဤအရာလေးခုအကြားကွဲပြားခြားနားသောလက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုခွဲခြားသိမြင်ရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးချယ်ထားသောလိင် - သမိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုရှာဖွေလေ့လာခြင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စားပွဲတင်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း 3ကျနော်တို့ hypersexuality နှင့်အတူကုသမှု-စိတ်ဝင်စားယောက်ျားကပိုမကြာခဏ masturbated နှင့်အကြီးအကျယ်ကျဆင်းနေသို့မဟုတ်လုံးဝအခြားအုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါညစ်ညမ်းသုံးပြီးဆေးလိပ်ဖြတ်ဖြစ်စေဖို့ပိုအတိတ်ကြိုးစားမှုအစီရင်ခံကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
စားပွဲတင်3။ hypersexual status ကိုအားဖြင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာကြံအတွက်တစ်ဦးချင်းစီ '' အကျိုးစီးပွားနှင့်ဆက်စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-သမိုင်းအချက်များကို Select လုပ်ပါ
TX-စိတ်ဝင်စား hypersexual (n = ၂၀132)
TX-စိတ်မဝင်စား hypersexual (n = ၂၀227)
Non-hypersexual TX-စိတ်ဝင်စား (n = ၂၀54)
Non-hypersexual TX-စိတ်မ (n = ၂၀884)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက် 10.93 0.09
10 ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းမိတ်ဖက် 53.8 48.0 68.5 54.6
11-20 မိတ်ဖက် 20.5 26.0 13.0 24.5
30 + မိတ်ဖက် 25.8 26.0 18.5 20.8
10 ကြိမ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း 28.2 32.4 37.1 38.0
11-20 ကြိမ် 26.0 27.5 24.5 31.0
21 + ကြိမ် 45.8 40.1 37.7 31.1
porn အသုံးပြုမှု frequency 5.7 (1.8)a 5.6 (1.7)a 4.9 (2.0)b 4.9 (1.7)b 14.12
ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်အချိန်ပမာဏ 2.4 (1.2)d 2.2 (1.2)ဃ, c ကို 1.9 (1.2)က c,e1.7 (1.2)e 20.64
ကြိုးစားမှုပြန် Cut 299.8
0 ကြိုးစားမှု ( "ဘယ်တော့မှ") 10.6 47.6 18.5 70.0
1-to-3 ကြိုးစားမှုအတိတ် 32.6 31.3 61.1 21.4
4 + အတိတ်ကြိုးစားမှု 56.8 21.1 20.4 8.6
ကြိုးစားမှု Quit 323.1
0 ကြိုးစားမှု ( "ဘယ်တော့မှ") 22.0 56.8 33.3 79.6
1-to-3 ကြိုးစားမှုအတိတ် 30.3 29.1 44.4 16.6
4 + အတိတ်ကြိုးစားမှု 47.7 14.1 22.2 3.7
မှတ်စု။ Pearson chi-စတုရန်းစမ်းသပ် dichotomous variable တွေကိုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ one-way ANOVA စဉ်ဆက်မပြတ် variable တွေကိုများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
Post ကို hoc ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (အနည်းဆုံးသိသိသာသာခြားနားချက်) (နည်းလမ်းသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည်ဘယ်မှာဖျောညှနျးမှကောက်ယူခဲ့သည်p <0.05) ။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာထူးခြားမှုမရှိသည့်နေရာများကိုညွှန်ပြရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် superscripts ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။p <0.05) ။ ရဲရင့်သောတန်ဖိုးများသည်အရေးပါမှုကိုရည်ညွှန်းသည် p <0.05 ။
ဒီလေ့လာမှုကများပျံ့နှံ့ဆန်းစစ်နှင့်အချက်များညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာကြံအတွက်ယောက်ျားရဲ့အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူဆက်နွယ်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်တဦးတည်းခုနစ်ယောက်ယောက်ျားညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာကြံတစ်ဦးကလက်ရှိအကျိုးစီးပွားအစီရင်ခံတင်ပြပေမယ့်သေးဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်အရှက်ကွဲခြင်း, အရှက်, ဒါမှမဟုတ်ဘယ်မှာအကူအညီတောင်းသွားကြဖို့နှင့် ပတ်သက်. အသိပညာများမရှိခြင်း, ဒါပြုတော်မခဲ့သည်။ လေ့လာမှုမှာနည်းပါးလာယောက်ျား (6.4%) ယခင်ကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာကြံသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အရင်ကကုသမှုဆည်းကပ်သောသူတို့ကိုယောက်ျား၏ထက်ဝက်ခန့်နေဆဲအရှိဆုံးကုသမှုသာဆိုနိုင်သည်ထောကျအကူပွုကွောငျးကိုညွှန်ပြသော်လည်း, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီတောင်းတဲ့အလိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြောဆိုပါတယ်။ တှေ့ရှိ
အဆိုပါ HBI အပေါ်တိုင်းတာအဖြစ် Next ကိုကျနော်တို့ (hypersexuality ၏အစီရင်ခံစာများလေ့လာReid et al ။ , 2011) ။ တွေးဆအမျှကျနော်တို့ကုသမှု-စိတ်ဝင်စားယောက်ျားကုသမှု-စိတ်မယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပု HBI စုစုပေါင်းနှင့် subscales အပေါ်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားရမှတ်အစီရင်ခံကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအကြံပြုလက်တွေ့-ဖြတ်ပယ် 53 ၏ရမှတ်ဒါမှမဟုတ် HBI အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားအသုံးပြုတဲ့အခါကျနော်တို့ (ထိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 28% ကိုတွေ့n = 359) အမျိုးသားအားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော HD အတွက်အကောင်းမြင်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ဤနှုန်းသည်ကုသမှုမခံယူသောအမျိုးသားများအတွက် ၃% မှ ၅% အထိကွဲပြားသောအထွေထွေလူ ဦး ရေတွင် hypersexuality ခန့်မှန်းနှုန်းထက်များစွာပိုမိုမြင့်မားသည် (Kafka, 2010) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှုနှုန်းဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုနည်းလမ်း (ဆိုလိုသည်မှာ, အထီးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုပစ်မှတ်ထားထားတဲ့အွန်လိုင်းက်ဘ်ဆိုက်လေ့လာမှု) ၏အများကြီးပိုမိုမြင့်မားသည်နှင့်အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်ပုံမှန်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများကိုထင်ဟပ်အဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမဖြစ်သင့်ယုံကြည်ပါတယ်။ လက်ရှိတွေ့ရှိချက်အားလုံးညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူ 28% hypersexuality နှင့်အတူပြဿနာများတွေ့ကြုံခံစားကြောင်းအကြံပြုအဖြစ်အနက်မရသင့်သည်, အစားကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကိုသာ hypersexuality နှင့်အချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းညစ်ညမ်း၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းအကြားဆက်ဆံရေးအားဟောပြောနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာကြံအတွက်စိတ်ဝင်စားမှုဖော်ပြခဲ့ကြသည်သောလူတို့၏ 71% ကို HBI လက်တွေ့ cutoff ရမှတ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသို့မဟုတ်ကျော်လွန်သွားသော။ ကိုတွေ့ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ယေဘုယျအားဖြင့်, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာကြံအတွက်အကျိုးစီးပွားသတင်းပို့ယောက်ျားဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ hypersexuality နဲ့ဆက်စပ်ရောဂါလက္ခဏာတွေအစီရင်ခံခဲ့ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
လူ ဦး ရေဆိုင်ရာနှင့်လိင်ဆိုင်ရာသမိုင်းအချက်အလက်များသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအတွက်စိတ် ၀ င်စားသူသို့မဟုတ်စိတ်မ ၀ င်စားသူများကိုခွဲခြားခြင်းရှိမရှိကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့စူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူဆချက်ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုသမှုကိုစိတ်မ ၀ င်စားသောအမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကုသမှုကိုစိတ် ၀ င်စားသောအမျိုးသားများသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများပိုမိုအသုံးပြုခြင်း (အကြိမ်ရေနှင့်ကြာချိန်နှစ်ရပ်စလုံး)၊ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုဖြတ်တောက်ခြင်း၊ အပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းနှင့်ပိုမိုထိတွေ့ခြင်း၊ အတိတ်လ၌။ အမျိုးသားများအနေဖြင့်ကုသမှုကိုစိတ် ၀ င်စားမှုသည်လွန်ခဲ့သောရက် ၃၀ အတွင်းဆက်ဆံရေးအခြေအနေ (တစ်ကိုယ်ရေ)၊ ပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအကြိမ်များနှင့်ယခင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းအတွက်ကုသမှုရှာဖွေရန်သမိုင်းကြောင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ ထို့နောက် Binary Logistic Regression ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရ ၁ မှ ၃ နှင့် ၄+ တို့သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အတူကြိုးစားမှုများကို“ ဖြတ်တောက်” သည်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်အတူ ၄ ကြိမ်မှထွက်ရန်ကြိုးစားသည်။ ကုသမှုအဆင့်အတန်း။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ကကုသမှု - ရှာဖွေ - အကျိုးစီးပွားအဆင့်အတန်းအားဖြင့် hypersexuality နှင့်အတူနှင့်မပါဘဲယောက်ျား၏လက်တွေ့ဝိသေသလက္ခဏာများအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိမရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုသမှုကိုစိတ်ဝင်စားသောအမျိုးသားများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ယခင်အဖွဲ့များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုလုံးဝဖြတ်တောက်ရန်သို့မဟုတ်လုံးဝဖြတ်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများကိုယခင်ကထက် ပိုမို၍ တွန်းအားပေးခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်လက်ရှိတွေ့ရှိချက်ကိုကုသရာတွင်စိတ်ဝင်စားမှုညစ်ညမ်းနှင့်ဆက်စပ်သောသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေးနဲ့အပြုအမူတွေအပေါ် "ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံး" ၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် '' အသိအသုံးပြုပုံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက်ကရှင်းပြသည်စေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အထူးကုသမှုစိတ်ဝင်စားယောက်ျားအပြုအမူတွေကိုအစီရင်ခံတင်ပြအခက်အခဲညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုထိန်းညှိရှိခြင်းနဲ့ဆက်စပ်နှင့် hypersexual လက္ခဏာတွေ (ဥပမာအားကြီးသောမတရားသောနှင့်အလိုဆန္ဒများနှင့်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေး) (ဥပမာကျောဖြတ်သို့မဟုတ်လုံးဝညစ်ညမ်းသုံးပြီးဆေးလိပ်ဖြတ်ဖြစ်စေရန်ပျက်ကွက်ကြိုးစားမှုထပ်ခါတလဲလဲ) ။ Sud (နှစ်ဦးစလုံးAmerican Psychiatric Association, 2013) နှင့် HD ကို (Kafka, 2010) အဖြေရှာတဲ့စံညစ်ညမ်း၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အခြားစွဲလမ်းအပြုအမူတွေနှင့်အတူတူညီဝေမျှစေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း, Self-ထိန်းချုပ်မှုချို့ယွင်းပါဝင်သည်။ ညံ့ဖျင်းသောချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ထဲမှာပါဝငျသုံးစွဲအချိန်ကန့်သတ်ဖို့အခွအေနေအတှေ့အကွုံမြောက်မြားစွာမအောင်မြင်ကြိုးစားမှုကြောင့်ထိခိုက်သူများ, တိုကျတှနျးထားကြောင်းအဆိုတင်သွင်းသောလည်း, HD များ၏ဗဟိုအင်္ဂါရပ်ဖြစ်တယ်, dysphoric စိတ်ဓါတ်များသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များ (တုန့်ပြန်အပြုအမူတွေKafka, 2010) ။ အခြားလေ့လာမှုနှင့်အတူအလားတူ (Gola et al ။ , 2016), ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုကျော်ချို့ယွင်း Self-ထိန်းချုပ်မှုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုကိုစိတ်ဝင်စားလူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အရေးပါသောထည့်သွင်းစဉ်းစားဖြစ်နိုင်ပါတယ်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီများလိုအပ်နိုင်ပါသည်သူကိုအသုံးပြုသူများကကိုဖေါ်ထုတ်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်အံ့သောငှါတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပွငျအရာတစျခုရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူ "ထိန်းချုပ်မှုထဲက" ခံစားဖို့ဒီဂရီညစ်ညမ်းကုသမှု-ရှာကြံအပြုအမူစာပေအတွက် unexplored ဖြစ်နေဆဲ catalyzes ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ထိုကဲ့သို့သောအလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်း၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အခြား dysregulated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေများအတွက်ကုသမှုရှာကြံ၏အပြစ်တွေ / cons အလေးချိန်ကြသူတစ်ဦးချင်းစီအဘို့ရည်ရွယ်ချက်ညွှန်းကိန်းအဖြစ်ညစ်ညမ်းလုပ်ရပ်သုံးပြီးဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်ပျက်ကွက်ကြိုးစားမှုအဖြစ်သူတို့အားအပြုအမူတွေအကြံပြုအပ်ပါသည်။
အပိုဆောင်းသုတေသန hypersexuality တစ်အတိုင်းအတာအပေါ်အကြံပြုချက် cutoff ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုတစ်ခုအတိုးအစီရင်ခံသောလူတို့၏ 29% ဖြည့်ဆည်း (သို့မဟုတ်ကျော်လွန်) မပြုခဲ့ဘာဖြစ်လို့နားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ အထူးသကနောက်ထပ်အကြောင်းအချက်များ (ဥပမာ, ကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေ, ယာနျဘာသာတရားကို၏အဆငျ့နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတန်ဖိုးများ / ယုံကြည်ချက်) ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာကြံအတွက်ယောက်ျားရဲ့ Self-အစီရင်ခံအကျိုးစီးပွားဆက်စပ်ဖြစ်နိုင်သည်ရှိမရှိနားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်ပါလိမ့်မယ်။ ညစ်ညမ်းသုံးပြီးငယ်ရွယ်အထီးအကြားအသုံးပြုမှုအဆင့်ဆင့်မှမသက်ဆိုင်သောဖြစ်ခြင်းစဉ်ကဤဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အညီ, ညစ်ညမ်း၏စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏ကစာရင်းအင်း (အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှရိပ်မိစွဲဟောကိန်းထုတ်Grubbs et al ။ , 2015) ။ ညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်အခြားပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူနေ၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်အကူအညီရှာတစျခုရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အထောက်အကူပြုရည်ရွယ်ချက်နှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္နှစ်ဦးစလုံးအဘယ်အရာကိုအချက်များ, နားလည်ခြင်းအနာဂတ်သုတေသနစောင့်ကြို။
လက်ရှိတွေ့ရှိချက်လက်တွေ့အလေ့အကျင့်ဘို့သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ညစ်ညမ်း၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ကုသမှုရှာကြံလူနာအကြားပေးသောမကြာခဏပူးတွဲဖြစ်ပေါ်စိတ်ရောဂါမမှန် (Kraus, Potenza, et al ။ , 2015; Reid et al ။ , 2012), အပြုအမူတွေကို detect လုပ်ဖို့ထိရောက်သောစိစစ်အလေ့အထများဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများရိပ်မိအရှုံးနဲ့ဆက်စပ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်းတည်းကကုသမှုမရှိဘူး hypersexuality နှင့်အတူပုဂ္ဂိုလ်များဖော်ထုတ်မှုအတွက်အသုံးဝင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခြို့သော features တွေအလိုဆန္ဒ-for-ကုသမှု status ကိုချိတ်ဆက်ပုံပျေါလွင်ကတည်းကပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေး, hypersexuality သို့မဟုတ်ပြဿနာညစ်ညမ်းကြည့်နဲ့ဆက်စပ်မီးမောင်းထိုးပြဆိုင်းဘုတ်များ / လက္ခဏာတွေပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်တိကျတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-ထိန်းချုပ်မှုရှုထောင့်, Impulse နှင့် / သို့မဟုတ် compulsive များအတွက်အကဲဖြတ်ပြပစ္စည်းများကိုဒီဇိုင်းပိုကောင်း (ကုသမှု-ရှာကြံလူနာထိတွေ့ဆက်ဆံဘို့ကုသမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအထူးသဖြင့်သူတို့အား ambivalent ချဉ်းကပ်အကြောင်းကြားစေခြင်းငှါရိဒ်, 2007).
လက်ရှိလေ့လာမှုတစ်ခုမှာအလားအလာန့်အသတ်အသုံးပြုသူများကို '' လူဦးရေအချိုးအစားနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်းဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် hypersexuality အပေါ်ဒေတာစုဆောင်းရန် Self-အစီရင်ခံစာအစီအမံများအသုံးပြုခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ self-အစီရင်ခံစာ data တွေကိုတစ်ဦးချင်းစီ '' ၏စာမျက်နှာနဲ့သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုထုတ်ဖော်ရန်စိတ်အားထက်သန်အပေါ်အားကိုး။ သို့သော်အင်တာနက်-based ချဉ်းကပ် အသုံးပြု. လေ့လာမှုသင်တန်းသားများအားဖြင့်အမည်မဖော်များနှင့်လျှော့ချ underreporting တိုးမြှင့်ကူညီပေးခဲ့မည် သို့သော်ဒီဖြစ်နိုင်ခြေမှန်းဆနေဆဲဖြစ်သည်။ Cross-Section အချက်အလက်များ၏အသုံးပြုမှုလေ့လာတွေ့ရှိအသင်းအဖွဲ့များ၏ causation သို့မဟုတ် directionality စကားမပွောနိုငျပါ။ တွေ့ရှိချက်များကိုလည်း hypersexual အပြုအမူတွေ၏အခြားမျိုး (ဥပမာမကြာခဏအမည်မသိ / ပေါ့ပေါ့လိင်, compulsive တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်း, လိင် paid) အတွက်ကုသမှုလိုသောတစ်ဦးချင်းစီမှယဘေုယမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်, ဒီလေ့လာမှုအမျိုးသမီးတွေမပါဝင်ခဲ့ချေ။ HD ကိုပိုပြီးပုံမှန်အားဖြင့်အမျိုးသားများတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်သော်လည်း hypersexual အမျိုးသမီးတွေ (မြင့်သောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအကြိမ်ရေ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များ၏အရေအတွက်နှင့်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့Klein, Rettenberger, & Briken, 2014) ။ လောလောဆယ်နောက်ထပ်သုတေသန၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်အခြား hypersexual အပြုအမူတွေကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ကုသမှုရှာကြံအတွက်, အမျိုးသမီးရဲ့အကျိုးစီးပွားနှင့်ဆက်စပ်သည့်အချက်များလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါသည်။ လက်ရှိလေ့လာမှုတစ်ခုနောက်ဆုံးကန့်သတ်ကျနော်တို့သင်တန်းသားများ၏ပြိုင်ပွဲ / လူမျိုးရေးတိုင်းတာမပြုခဲ့ကြောင်း, သို့သော်အစား, နေထိုင်ရာသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်အကြောင်းကိုမေးတယ်။ ကန့်သတ်ဒေတာ (hypersexuality များအတွက်ကုသမှုရှာကြံတစ်ဦးချင်းစီကတခြားအုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကော့ကေးဆပ် / အဖြူတစ်ဦးချင်းစီအကြားပိုမိုဖြစ်စေခြင်းငှါအကြံပြုFarré et al ။ , 2015; Kraus, Potenza, et al ။ , 2015; Reid et al ။ , 2012); သို့သော်သတိထားရရှိနိုင့် epidemiological data များမရှိခြင်းပေးသောကြောင့်တခြားနေရာကဖော်ပြခဲ့သည် sociodemographic သို့မဟုတ်လူမျိုးရေး / လူမျိုးစုကွဲပြားမှု (ထိုကဲ့သို့သောကုသမှုပေးသူမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိခြင်းကဲ့သို့သောအခြားအချက်များအသုံးပြုပုံအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက်ကရှင်းပြသည်စေခြင်းငှါအကြံပေးနေသည်Kraus et al ။ , 2016) ။ ညစ်ညမ်းသို့မဟုတ် hypersexuality ၏ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ကုသမှုအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဆက်ဆံရေးမသိရသေးကြောင့်အနာဂတ်သုတေသနပြိုင်ပွဲ / လူမျိုးစုအကဲဖြတ် variable တွေကိုပါဝင်သည်သငျ့သညျ။
ဒီလေ့လာမှုကညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများအတွက်ကုသမှုရှာကြံအတွက် Self-အစီရင်ခံအကျိုးစီးပွားနှင့်ဆက်စပ်ယောက်ျားအတွက် features တွေဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အပိုဆောင်းသုတေသန (ဥပမာလိင်နှင့်အမည်မသိလိင် paid) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုတခြားအမျိုးအစားများနှင့်အတူပြဿနာများသတင်းပို့အမျိုးသမီးများနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်များအကြားဤအင်္ဂါရပ်ဆနျးစစျဖို့လိုတယျ။ အနာဂတ်သုတေသနဂရုစိုက်ဖို့ဖြစ်နိုင်အတားအဆီးတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ် (အရှက်ကွဲခြင်းနှင့်အရှက်နှင့်ရိပ်မိအမည်းစက်နှင့်စပ်လျဉ်းဥပမာကုသမှုရရှိနိုင်မှု, ဘဏ္ဍာရေးနည်းလမ်းများ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များ) နှင့်ညစ်ညမ်းသူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းအကူအညီနဲ့ရယူစိတ်ဝင်စားသူတို့အဘို့ကုသမှုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများအတွက်စည်းရုံးရေးမှူးများ။
SWK (ကျောင်းအုပ်ကြီးသုတေသန) ကကနဦးလေ့လာမှုဒီဇိုင်း, ဒေတာစုဆောင်းခြင်း, ရလဒ်၏အနက်ကိုမှလှူဒါန်းခဲ့သည်နှင့်, လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ရေးဆွဲ။ SM နှင့် MNP ရလဒ်၏အနက်ကို, လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး, နှင့်နောက်ဆုံးမူကြမ်းကိုအတည်ပြုချက်မှလှူဒါန်းခဲ့သည်။ SWK ထုတ်ဝေရန်တင်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက်နောက်ဆုံးတာဝန်ယူရတယ်။ အားလုံးစာရေးဆရာများလေ့လာမှုအားလုံးကိုဒေတာမှအပြည့်အဝသုံးစွဲနိုင်ခဲ့များနှင့်ဒေတာများ၏သမာဓိနှင့်ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုများအတွက်တာဝန်ယူပါ။
အဆိုပါစာရေးဆရာကဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်များ၏ content မှလေးစားမှုနှင့်အတူအကျိုးစီးပွားမျှပဋိပက္ခများကိုသတင်းပို့ပါ။ SWK နှင့် SM ထုတ်ဖော်ရန်မဆက်ဆံရေးရှိသည်။ MNP ဘို့တိုင်ပင်ခြင်းနှင့် Ironwood, Lundbeck, INSYS, Shire နှင့် RiverMend ကနျြးမာရေးအကြံပေးနှင့် Mohegan Sun ကကာစီနိုတာဝန်ယူမှုဂိမ်းများအတွက်အမျိုးသားစင်တာ, Pfizer ကနေသုတေသနပြုထောက်ခံမှုရရှိထားပေမယ့်ဒီအဖွဲ့အစည်းများအဘယ်သူအားမျှလက်ရှိသုတေသနထောက်ခံခဲ့သည်။
American Psychiatric Association ။ (2013) ။ စိတ်ရောဂါ၏အဖြေရှာတဲ့နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလက်စွဲစာအုပ်: DSM5။ Arlington, VA သို့: bookpointUS ။ CrossRef
Coleman, အီး, Horvath, K. ဂျေ, Miner, အမ်, ရော့စ်, အမ်ဒဗလျူ, Oakes, အမ်, Rosser, ခ R. အက်စ်, & အမျိုးသားရဲ့ INTernet လိင် (MINTS-II) အဖွဲ့ (2010) ။ အမျိုးသားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောယောက်ျားများကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်အန္တရာယ်ကင်းစွာလိင်ဆက်ဆံရန်အတင်းအကျပ်ပြုခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 39 (5), 1045-1053 ။ Doi: 10.1007 / s10508-009-9507-5 CrossRef, Medline
Coleman, အီး, ရေမွန်, N. , & McBean, အေ (2003) ။ compulsive လိင်အပြုအမူ၏အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ကုသမှု။ မင်နီဆိုတာဆေးပညာ, 86 (7), 42-47 ။ Medline
က de Tubino Scanavino, အမ်, Ventuneac, အေ, Abdo, C. အိပ်ချ် N. , Tavares, အိပ်ချ်, Amaral, အမ်အက်စ်, Messina, ခ, dos Reis, အက်စ်စီ, Martins, JPLB, & Parsons, ဂျေတီ (2013) ။ ဘရာဇီးနိုင်ငံ၊ ဆောပိုလိုမြို့ရှိကုသမှုခံယူနေသည့်အမျိုးသားများအကြားအတင်းအဓမ္မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်စိတ်ပညာ။ စိတ်ရောဂါကုသမှုသုတေသန, 209 (3), 518-524 ။ Doi: 10.1016 / j.psychres.2013.01.021 CrossRef, Medline
အက်ဖ်၊ ဂရန်ရို၊ R. ၊ အာရာဂေး၊ N. ၊ Mallorquí-Bague၊ N. , Ferrer, V. , More၊ အေ၊ Bouman၊ WP၊ Arcelus၊ ဂျေ၊ , Penelo, အီး, Aymamí, MN, Gómez-Peña, အမ်, Gunnard, K. , Romaguera, အေ, Menchón, JM, Vallès, V. , & Jimenez-Murcia, အက်စ် (2015) ။ လိင်စွဲခြင်းနှင့်လောင်းကစားခြင်းရောဂါ - တူညီခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, 56, 59-68 ။ Doi: 10.1016 / j.comppsych.2014.10.002 CrossRef, Medline
Gola, အမ်, Lewczuk, K. , & Skorko, အမ် (2016) ။ အဘယ်အရာကအရေးကြီးသနည်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေပမာဏ၏အရည်အသွေးသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကဘာလဲ။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကုသမှုရှာဖွေရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအချက်များ။ လိင်ဆေးပညာ၏ဂျာနယ်, 13, 815-824 ။ Doi: 10.1016 / j.jsxm.2016.02.169 ။ CrossRef, Medline
Grant, JE, Atmaca, M. , Fineberg, NA, Fontenelle, LF, Matsunaga, H. , Janardhan Reddy, YC, Simpson, HB, Thomsen, PH, van den Heuvel, OA, Veale, D. , Woods, DW, & Stein, DJ သမား (2014) ။ Impulse Control Disorders နှင့် ICD-11 ရှိ“ အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှု” ။ ကမ္ဘာ့ဖလားစိတ်ရောဂါကုသမှု, 13, 125-127 ။ Doi: 10.1002 / wps.20115 CrossRef, Medline
Grubbs, ဂျေခ, Exline, ဂျေဂျေ, Pargament, K. ဗြဲ, Hook, ဂျေ N. , & Carlisle တို့, R. D. (2015) ။ စွဲလမ်းမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုစွဲလမ်းမှု၏ခန့်မှန်းချက်အနေဖြင့်ဘာသာရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 44 (1), 125-136 ။ Doi: 10.1007 / s10508-013-0257-z CrossRef, Medline
Hald, G. အအမ်, & Malamuth, N. အမ် (2008) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှု၏မိမိကိုယ်ကိုမြင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 37 (4), 614-625 ။ Doi: 10.1007 / s10508-007-9212-1 CrossRef, Medline
ချိတ်ဂျေ N. , ရိဒ်, R. C. , Penberthy, ဂျေကေ, Davis က, D. အီး, & Jennings, D. ဂျေ, II ကို။ (2014) ။ nonparaphilic hypersexual အပြုအမူများအတွက်ကုသမှုနည်းစနစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ လိင် & အိမ်ထောင်ရေးကုထုံး၏ဂျာနယ်, 40 (4), 294-308 ။ Doi: 10.1080 / 0092623X.2012.751075 CrossRef, Medline
Kafka, အမ်ပီ (2010) ။ Hypersexual Disorder: DSM-V အတွက်အဆိုပြုထားတဲ့ရောဂါ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 39 (2), 377-400 ။ Doi: 10.1007 / s10508-009-9574-7 CrossRef, Medline
Kingston, D. အေ (2015) ။ လိင်အယူအဆကိုစွဲလမ်းစေသောရောဂါတစ်ခုအဖြစ်ဆွေးနွေးခြင်း။ လက်ရှိစွဲအစီရင်ခံစာများ, 2, 195-201 ။ Doi: 10.1007 / s40429-015-0059-6 CrossRef
Klein, V. , Rettenberger, အမ်, & Briken, P. (2014) ။ Self- အစီရင်ခံ hypersexuality ၏ညွှန်းကိန်းများနှင့်အမျိုးသမီးအွန်လိုင်းနမူနာအတွက်၎င်း၏ဆက်စပ်မှု။ လိင်ဆေးပညာဂျာနယ်, 11 (8), 1974-1981 ။ Doi: 10.1111 / jsm.12602 CrossRef, Medline
Kor, အေ, Fogel, Y. , Reid, R. C. , & Potenza, အမ် N. (2013) ။ hypersexual Disorder ကိုစွဲလမ်းမှုအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်သလား။ လိင်အကျင့်စွဲ, 20 (1-2), 27-47 ။ Doi: 10.1080 / 10720162.2013.768132
Kor, အေ, Zilcha-Mano, အက်စ်, Fogel, Y. အေ, Mikulincer, အမ်, ရိဒ်, R. C. , & Potenza, အမ် N. (2014) ။ ပြtheနာအပြာစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှု။ စွဲလမ်းအပြုအမူ, 39 (5), 861-868 ။ Doi: 10.1016 / j.addbeh.2014.01.027 CrossRef, Medline
Kraus, အက်စ်ဒဗလျူ, Meshberg-Cohen ကို, အက်စ်, Martino, အက်စ်, Quinones, အယ်လ်ဂျေ, & Potenza, အမ် N. (2015) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကို naltrexone ဖြင့်ကုသခြင်း - ဖြစ်ရပ်မှန်အစီရင်ခံစာ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 172 (12), 1260-1261 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.2015.15060843 CrossRef, Medline
Kraus, အက်စ်ဒဗလျူ, Potenza, အမ် N. , Martino, အက်စ်, & Grant က, ဂျေအီး (2015) ။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုသူများ၏နမူနာတွင်ယေးလ် - ဘရောင်း၏စွဲလမ်းမှု - compulsive စကေး၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုစစ်ဆေးခြင်း။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, 59, 117-122 ။ Doi: 10.1016 / j.comppsych.2015.02.007 CrossRef, Medline
Kraus, အက်စ်, & Rosenberg က, အိပ်ချ် (2014) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမေးခွန်းများ - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 43 (3), 451-462 ။ Doi: 10.1007 / s10508-013-0229-3 CrossRef, Medline
Kraus, အက်စ်ဒဗလျူ, & Rosenberg က, အိပ်ချ် (2016) ။ မီး၊ ကင်မရာ၊ ကွန်ဒုံးများ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွင်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကောလိပ်အမျိုးသားများ၏သဘောထားကိုအကဲဖြတ်ခြင်း။ အမေရိကန်ကောလိပ်ကျန်းမာရေးဂျာနယ်, 64 (2), 1-8 ။ Doi: 10.1080 / 07448481.2015.1085054 CrossRef, Medline
Kraus, အက်စ်ဒဗလျူ, Rosenberg က, အိပ်ချ်, & Tompsett, C. ဂျေ (2015) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း - လျှော့ချရေးနည်းဗျူဟာများကိုအသုံးပြုရန်မိမိကိုယ်ကိုထိရောက်မှုရှိမရှိအကဲဖြတ်ခြင်း။ စွဲလမ်းအပြုအမူ, 40, 115-118 ။ Doi: 10.1016 / j.addbeh.2014.09.012 CrossRef, Medline
Kraus, အက်စ်ဒဗလျူ, Voon, V. , & Potenza, အမ် N. (2016) ။ compulsive လိင်အပြုအမူတစ်ခုစွဲထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သလဲ စွဲ။ အွန်လိုင်းထုတ်ဝေမှုတိုးတက်ရန်။ Doi: 10.1111 / add.13297 Medline
မော်ဂန်, အီးအမ် (2011) ။ ငယ်ရွယ်သောအရွယ်ရောက်သူများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ၄ င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး စားပေးမှုများ၊ အပြုအမူများနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုများ။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 48 (6), 520-530 ။ Doi: 10.1080 / 00224499.2010.543960 CrossRef, Medline
Morgenstern, ဂျေ, Muench, အက်ဖ်, O'Leary, အေ, Wainberg, အမ်, Parsons, ဂျေတီ, Hollander, အီး, Blain, အယ်လ်, & Irwin, တီ (2011) ။ Paraphilic မဖြစ်မနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်လိင်တူချင်းချစ်သူများနှင့်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာပူးတွဲရောဂါများ။ လိင်စွဲ & compulsivity, 18 (3), 114-134 ။ Doi: 10.1080 / 10720162.2011.593420 CrossRef
Moser, C တို့ (2013) ။ Hypersexual ရောဂါ: ရှင်းလင်းပြတ်သားရှာဖွေခြင်း။ လိင်စွဲမှုနှင့်ထိုးစစ်များ၊ ၂၀ (၁-၂)၊ ၄၈-၅၈ ။ Doi: 20 / 1
Parsons, ဂျေတီ, Grov, C တို့, & Golub, အက်စ်အေ (2012) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ ပူးတွဲပါ ၀ င်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပြproblemsနာများနှင့်လိင်တူချစ်သူနှင့်လိင်နှစ်မျိုးလုံးအမျိုးသားများအကြားအိပ်ချ်အိုင်ဗွီပိုးကူးစက်မှု - စုပေါင်းရောဂါ၏နောက်ထပ်သက်သေသာဓက။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး၏အမေရိကန်ဂျာနယ်, 102 (1), 156-162 ။ Doi: 10.2105 / AJPH.2011.300284 CrossRef, Medline
Piquet-Pessôa, အမ်, Ferreira, G. အအမ်, Melca, ဗြဲအေ, & Fontenelle, အယ်လ်အက်ဖ် (2014) ။ DSM-5 နှင့်လိင်၊ ဈေးဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုအဖြစ်ခိုးခြင်းမပြုရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။ လက်ရှိစွဲအစီရင်ခံစာများ, 1 (3), 172-176 ။ Doi: 10.1007 / s40429-014-0027-6 CrossRef
ရေမွန်, N. C. , Coleman, အီး, & Miner, အမ်အိပ်ချ် (2003) ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ comorbidity နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် compulsive / ထကြွလွယ်သောစရိုက်များ။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု, 44 (5), 370-380 ။ Doi: 10.1016 / S0010-440X (03) 00110-X ကို CrossRef, Medline
Reid, R. C. (2007) ။ hypersexual အပြုအမူအတွက်အကူအညီတောင်းဖောက်သည်များအကြားပြောင်းလဲပစ်ရန်အဆင်သင့်အကဲဖြတ်။ လိင်စွဲ & compulsivity, 14 (3), 167-186 ။ Doi: 10.1080 / 10720160701480204 CrossRef
ရိဒ်, R. C. , လက်သမား, ခ N. , ချိတ်, ဂျေ N. , Garos, အက်စ်, Manning, ဂျေစီ, Gilliland, R. , Cooper က, အီးခ, McKittrick, အိပ်ချ်, Davtian, အမ်, & Fong, တီ (2012) ။ hypersexual disorder အတွက် DSM-5 ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုမှတွေ့ရှိချက်များကိုအစီရင်ခံစာ။ လိင်ဆေးပညာ၏ဂျာနယ်,9(11), 2868-2877 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2012.02936.x CrossRef, Medline
ရိဒ်, R. C. , Garos, အက်စ်, & လက်သမား, ခ N. (2011) ။ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ တရားဝင်မှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအမျိုးသားပြင်ပလူနာနမူနာတွင်ဖော်ပြထားသည်။ လိင်စွဲ & မငြိမ်မသက်, 18 (1), 30-51 ။ Doi: 10.1080 / 10720162.2011.555709 CrossRef
Rosenberg က, အိပ်ချ်, & Kraus, အက်စ် (2014) ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအတွက်လိင်အ comp တ်ခိုင်းစေခြင်း၊ အသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုတပ်မက်ခြင်းတို့၏အသည်းအသန်ဆက်နွယ်မှု။ စွဲလမ်းအပြုအမူ, 39 (5), 1012-1017 ။ Doi: 10.1016 / j.addbeh.2014.02.010 CrossRef, Medline
ရော့စ်, အမ်ဒဗလျူ, Mansson, အက်စ်အေ, & Daneback, K. (2012) ။ ဆွီဒင်အမျိုးသားနှင့်မိန်းမများတွင်ပြproblemနာရှိသောလိင်ဆိုင်ရာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုပျံ့နှံ့မှု၊ ပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်စပ်မှုများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 41 (2), 459-466 ။ Doi: 10.1007 / s10508-011-9762-0 CrossRef, Medline
Wakefield, ဂျေစီ (2012) ။ DSM-5 ၏အဆိုပြုထားသောလိင်ဆိုင်ရာရောဂါအသစ်အမျိုးအစားများ - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာပြသည့်လက္ခဏာပြပြpositiveနာ။ လက်တွေ့လူမှုရေးအလုပ်ဂျာနယ်, 40 (2), 213-223 ။ Doi: 10.1007 / s10615-011-0353-2 CrossRef
ဆောင်းရာသီ, ဂျေ (2010) ။ Hypersexual ရောဂါမြား: A ပိုပြီးသတိထားချဉ်းကပ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 39 (3), 594-596 ။ Doi: 10.1007 / s10508-010-9607-2 CrossRef, Medline
Wright, P. ဂျေ (2013) ။ ယူအက်စ်အထီးနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၊ ၁၉၇၃-၂၀၁၀: စားသုံးမှု၊ ခန့်မှန်းသူနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 1973 (2010), 50-1 ။ Doi: 60 / 71 CrossRef, Medline